Ama-Meatballs ku-isanqante ne-zucchini sauce | Ukupheka Kwekhishi
Ama-Meatballs ku-isanqante ne-zucchini sauce
UMaria vazquez | 27/06/2021 10:00 | Inyama Ungadliwa, Amasaladi
Lapho umuntu engazi ukuthi alungiselele ukudlani, ama-meatballs ahlala abonakala eyindlela enhle. Singazenza ngenyama ebomvu, yenkukhu, i-cuttlefish noma i-vegan, njengalezo esizoziphakamisa emasontweni ambalwa, futhi bahambisane namasoso azo zonke izinhlobo. Lawa ma-meatballs ku-isanqante ne-zucchini sauce kungenye yezindlela eziningi esinazo.
Senze lawa ma-meatballs ngendlela yendabuko nge ingxube yenkomo nengulube. Ukwengeza enhlama u-anyanisi omncane, iqanda nesinkwa esifakwe obisini ukuzenza zibe nejusi. Ngokuqondene nesosi, asikwazanga ukuyithanda kakhulu! Umqondo wokuhlanganisa isanqante ne-zucchini awukwazanga ukuphumelela kakhulu.
I-sauce icebile kakhulu Sigcina ingxenye yawo ukuze sizenzele amaqanda agcwele izinkanyezi ngobusuku obubodwa, akukho lutho olulahlwa lapha! Ungusoso onombala omningi, onokunambitheka okuningi futhi onempilo kakhulu njengoba uzobona lapho ubona uhlu lwezithako. Ingabe uyalokotha ukulungisa lesi sidlo? Kopisha uhlu lwezithako bese uyothenga!
Lawa ma-meatballs anesanqante kanye ne-zucchini sauce ayi-dish enhle nganoma yisiphi isikhathi sonyaka futhi azohlala izinsuku ezintathu efrijini.
Okwe-meatballs (amayunithi ayi-15):
480g. inyama egayiwe (inyama yenkomo nengulube)
1 iqanda L
Imvuthuluka yesinkwa esigaxwe ubisi
10 g. imvuthuluka yesinkwa
100 g. utamatisi othosiwe
100 ml womhluzi wemifino
Sika u-anyanisi kahle uhlanganise zonke izithako ze-meatball (ngaphandle kofulawa) ngezandla zakho.
Ngemuva kwalokho, sibumba ama-meatballs bese siwashaya ngofulawa kancane.
Okulandelayo, sishisa izipuni ezintathu zamafutha epanini bese sithosa ama-meatballs aze abe nsundu (bazoqeda ukupheka esosweni). Njengoba zinsundu, zikhiphe bese uzibeka kupuleti.
Kuwoyela ofanayo (kungadingeka ukuthi ungeze isipuni ngaphezulu) manje sithosa u-anyanisi nesanqante oqoshiwe kahle imizuzu eyi-8 njengesisekelo sososo.
Ngemuva kwalokho, engeza i-zucchini ibe ngamacube amancane, inkathi bese upheka eminye imizuzu emine.
Ngemuva kwesikhathi, sithela utamatisi nomhluzi, uhlanganise kahle ukupheka yonke imizuzu eyi-8-10.
Okulandelayo, sichoboza i-sauce bese siyibuyisela emlilweni, sibeka ama-meatballs ku-sauce. Pheka imizuzu emihlanu ufake isivalo, uvule amabhola enyama phakathi nokupheka bese ucisha umlilo.
Siphaka ama-meatballs ku-isanqante eshisayo nesosi ye-zucchini bese sigcina okuseleyo esitsheni esingangeni moya, sikuse efrijini uma sesifudumele.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Ama-Meatballs ku-isanqante ne-zucchini sauce
Isaladi lamazambane nopelepele